यी युवकले बीच बाटोमै केटिको स्तान समातेपछि ! भिडियो सहित | Rajmarga
अहिले संसारभर रूचाइने गरीएकाे मनोरन्जनका लागि बनाइने ‘प्रयाङ्क भिडियो’ निकै चर्चित बन्दै अाएकाे छ । जसमा सामाजिक संदेश दिने देखि रमाइलो र हसाउने हेतुले बनाईने थुप्रै भिडियोहरु हामीले युटुबमा देख्न सकिन्छ । पपुलर युटुब प्रयाङ्क नामक एक यूटुब च्यानलले तयार पारेकाे यस्तो ‘प्रयाङ्क भिडियो’ देखाउन जाँदै छौं, साे प्रयाङ्क भिडियोमा एक पुरुषले बीचसडकमा खुलेयाम महिलाको संबेदनशीलअंग स्तन समाउदै हिडेका छन् । उनले भिडियोमा १०० जना महिलाको स्तन समाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस!
सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् ।
पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको भनेर भ्रममा पर्नु व्यर्थ हुन्छ । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । ब्रिटेनका शोधकर्ताहरुले एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन् ।
अध्ययन अनुसार सेक्स गर्दा महिलाहरु कराउँनु भनेको चरम सन्तुसष्ट पाउनु हो ।
शोधका अनुसार महिलाहरु सेक्स गरिरहेको बेला आह उह जस्ता आवाज यसकारण निकाल्छन् कि, जसले पुरुष साथीलाई उत्तेजित गर्न सकोस् । शोधकर्ताले १८ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७१ महिलामा यस्तो शोध गरेका थिए ।
अधिकांश महिलाहरु सेक्सवाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत महिलाहरुले आफुहरु चरम आनन्दसम्म नपुगेको वताएका थिए ।
८७ प्रतिशत महिलाहरुले चाहि आफ्नो पार्टनरप्रतिको प्रेम सम्वन्ध सुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए ।
शोधकर्ताले यस व्यवहारको पछाडि ‘सेक्स लगायतका कार्यमा पुरुषप्रधान मानसिकता हावी भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यसैले नै महिलाहरु आफ्नो सन्तुष्टिका साथ सम्झौता गरेर पनि पुरुष पार्टनरलाई खुसी तुल्याइरहेका हुन्छन् ।
महिलामा आर्गज्म अधिकांशतः फोर प्लेको क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ । यस क्रममा महिलाहरु सेक्सी आवाज निकाल्ने गर्छन् । महिलाहरु यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिवेला पुरुषहरु चरमोत्कर्षमा पुगेका हुन्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
Previous post: यसरी चलिरहेछ नेपालमा उद्योगधन्दाका नाममा धर्म परिवर्तनको धन्दा
Next post: यस्तो देखियो आयुबको क्रेज: दर्शकको ताली र सिठ्ठी